कसैले कसैलाई आफ्नो भक्ति गरेबापत शक्ति दिएपछिको परिणाम यस्तो हुन्छ । महादेवको तपस्या गरेबापत पाएको शक्तिले भष्मासुरले महादेवलाई नै लखेटेर भष्म गर्न खोजेको थियो रे । यो त मिथ ? वा हाम्रो विश्वास तर नियम र नियन्त्रणमा सबै समयन्त्र हुनुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
प्रतियोगितामा उत्कृष्टता हासिल गर्दै प्रितम र आयुष गत सोमबार स्वदेश फर्किएका छन् । ईटहरीका प्रितम पश्चिम बंगालको बागडोगरा विमानस्थलमा ओर्लिएर पूर्वी नाका काँकडभिट्टा हुँदै इटहरी आएका छन् भने आयुष विमानमार्फत काठमाडौं अवतरण गरेका हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
गायक प्राञ्जल पोखरेलको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । आफ्नै शब्द रहेको गायक पाखेरेलको सार्वजनिक गीतमा सागर अधिकारीले संगीत भरेका छन् । भैरहवामा रहेर नेपाली गीत/संगीतमा रमाउँदै आएका गायक पोख्रेलको यो तेस्रो गीत हो । पुरा पढ्नुहोस्
राजाराम पौडेल, असार १, २०७६
यहाँ डिलक्स र स्विट गरी ३८ वटा कोठा उपलब्ध छन् जसमा एक रात गुजारेको ३ हजारदेखि ५ हजार ५ सयसम्म शुल्क लाग्छ । शान्त वातावरणमा अवस्थित यो होटलको आफ्नै रेस्टुराँ पनि छ । पुरा पढ्नुहोस्
हरर चलचित्र भएपछि कुनै एक कलाकारले भूतको भूमिका निर्वाह गर्नु ठूलो कुरा पनि होइन । रोचक कुरा चाहिँ के छ भने हालसम्म शालिन छवि बनाएकी अभिनेत्री बेनिशा हमालले यो चलचित्रमा सेन्सर बोर्डको आँखा पर्ने शैलीको बेड सिन दिएकी छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
बैशाख ४ गते बुधवार प्रदर्शन हुन लागेको बलिउड चलचित्र ‘कलंक’ प्रदर्शनमा बिकास वोर्डका अध्यक्षले केशव भट्टराइले रोकिदिए । भट्टराई माथि चौतर्फी चर्चासँगै चुनौती थपियो । अबका चलचित्र पनि रोकिन्छन् त ? धेरैको प्रश्न थियो । केहि हप्ताअघि सलमान खानको भारत प्रदर्शनको समय बुधवारै थियो, तर यो चलचित्र चल्यो । वोर्ड अध्यक्षले रोक्न सकेनन् । पुरा पढ्नुहोस्
नेपाली चलचित्र फ्लप हुनुको कारण स्क्रिप्ट दमदार नहुनु धेरैले कारण मान्दै आएका छन् । यसै सन्र्दभमा नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले चलचित्रको स्क्रिप्ट लेखन कार्यशाला आयोजना गर्ने भएको छ ।आउँदो अगस्ट २१ देखि २७ सम्म मकवानपुरको इन्द्रसरोवर, कुन्साल र चित्लाङ मध्ये कुनै एक ठाउँमा स्क्रिप्ट लेखन कार्यशाला गरिने कार्यक्रम संयोजक केपी पाठकले जानकारी दिए । कार्यशालामा ६० जना भन्दा बढि व्यक्ती सहभागी हुन सक्ने उनले बताए । पुरा पढ्नुहोस्
नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले ‘नेपाल इन्टरनेसनल फिल्म फेष्टिभल को तेस्रो संस्करण आयोजना गर्ने भएको छ । आगामी २०२० फेबु्रअरी १३ देखि १७ सम्म काठमाडौमा आयोजना हुने फेष्टिभलमा सहभागी फिल्मका लागि आवेदन समेत खुल्ला गरिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्